कसरी लेखिएको थियो महाभारत, एक अद्भुत कथा जुन तपाई सुनेपछी अचम्म पर्नुहुनेछ, नछुटाई पढ्नुहोला - सुदूरखबर डटकम
कसरी लेखिएको थियो महाभारत, एक अद्भुत कथा जुन तपाई सुनेपछी अचम्म पर्नुहुनेछ, नछुटाई पढ्नुहोला
महाभारतमा थुप्रै घटना, सम्बन्ध र ज्ञानविज्ञानका रहस्य समाहित छन् । महाभारतका हरेक पात्र जीवन्त छन् चाहे ती कौरव हुन् वा पाण्डव, कर्ण हुन् वा कृष्ण, धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखण्डी वा कृपाचार्य नै किन नहोऊन् ।
महाभारत केवल योद्धाहरूको गाथामा सीमित छैन । महाभारतमा श्राप, प्रतीज्ञा एवं आशीर्वादका रहस्य समेत लुकेका छन् । हेरौं, के के छन् त त्यस्ता रहस्य ?
महाभारतका सबै प्रमुख योद्धा कसै न कसैका अवतार थिए । हरेक योद्धा विचित्र शक्तिसम्पन्न थिए । महिला हुन् वा पुरुष सबै पात्र विचित्र विशेषताले भरिएका थिए ।
महाभारतका कतिपय योद्धा आजसम्म पनि जीवित छन् भनिन्छ । कौरवहरूको जन्म पनि रहस्यले भरिएको छ । कौरव तथा पाण्डव न धृतराष्ट्र न त पाण्डुका सन्तान थिए । महाभारत कालमा विमान एवं परमाणु अस्त्रको प्रयोग भएको थियो ।
महान् योद्धा बर्बरीक एवं घटोत्कचको रहस्य पनि कम्ती अनौठो छैन । महाभारतका पात्रहरूको आपसी नातासम्बन्ध पनि एकदमै अचम्मसँग जेलिएको पाइन्छ । यो युद्ध आफन्तको युद्ध थियो । महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्रमै लड्नुमा समेत कारण थियो ।
महाभारतका धेरै घटना कुनै न कुनै श्रापका कारण घटित भएको थियो । महाभारतको युद्धमा निश्चित नियम बनाइएको थियो, जब कौरव पक्षबाट अभिमन्युलाई मारेर नियम तोडियो, त्यसपछि त त्यसको शृंखला नै चल्यो र यसको बढी फाइदा पाण्डव पक्षले उठायो । युद्धको अन्त भएको केही दिनपछि सारा योद्धा एक रातका लागि जीवित भएका थिए । कुरुक्षेत्रको युद्ध अन्त भएको केही वर्षपछि यादव कुलको विनाश गर्ने मुसल युद्ध भयो ।
सबैभन्दा ठूलो रहस्य उक्त युद्धमा मारिएका भनिएको लाखौं मानिसको लाश कहाँ पुग्यो वा के भयो भन्ने विषयमा छ । भनिन्छ, महाभारत युद्धका कारण कुरुक्षेत्रमा यति धेरै रगत बगेको थियो कि त्यहाँको माटोको रंग आजसम्म पनि रातो छ ।
त्यसरी माटै रातो हुने गरी रगत बगेको युद्धमा लाखौं योद्धाहरुकोको लासको अवशेष समेत नपाइनु आश्चर्यजनक कुरा हो । भनाइअनुसार जुन दिन जति पनि योद्धाहरु मर्दथे तीमध्ये अधिकांशको शव उनीहरुको आफन्तलाई जिम्मा लगाइन्थ्यो भने बाँकी त्यहीँ रहिरहन्थ्यो ।
युद्धको अन्तमा युधिष्ठिरको आज्ञाले कुरुक्षेत्रको भूमिमा एउटा पनि शव नरहने गरी जलाइएको थियो ।
अर्को रहस्य के छ भने प्रतिदिन लाखौं मानिसका लागि युद्ध भूमिको नजिकै एक शिविरमा भोजन बन्दथ्यो ।
युद्धको सुरुआत हुने दिन १८ अक्षैहिणी अर्थात् लगभग ४५ लाखभन्दा बढी मानिसका लागि भोजन तयार गरिएको थियो । यसपछि प्रतिदिन जति पनि योद्धा मर्दथे त्यही अनुपातमा खाना पनि कम नै बनाइन्थ्यो, खानेकुरा कहिल्यै धेरै हुने वा कम हुने हुँदैनथ्यो ।
तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने आज कतिजनाका लागि भोजन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो कसरी थाहा हुन्थ्यो ? यस विषयमा भनाइ के छ भने युद्धमा भोजनको व्यवस्था उडुपीका राजाले गर्दथे, उनी हरेक दिन बेलुका जब श्रीकृष्णलाई भोजन गराउँथे ।
भोजनका समयमा श्रीकृष्णले खाएको हेरेर भोलिपल्ट कतिजना योद्धा मर्दै छन् भन्ने कुरा उनी थाहा पाउँथे । यो कुराको जनाउ दिन श्रीकृष्ण प्रतिदिन उसिनिएको बदाम वा चामल खान्थे । त्यसै आधारमा राजाले कतिजनाका लागि खाना बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँथे । यसरी श्रीकृष्णका कारण हरेक दिन सैनिकहरुले टन्न खान पाउँथे भने एक दाना अन्न पनि खेर जाँदैनथ्यो ।
अर्को रहस्य के भने यस युगमा सत्ययुगका राजा मुचुकुन्द,इन्द्र आदि, त्रेतायुगका परशुराम, जाम्मवन्त तथा हनुमान आदि जीवित थिए । भगवान शिव तथा ब्रहृमासमेत थिए भने श्रीकृष्ण त स्वयं विष्णुकै अवतार भइहाले ।
नरोकिइकन लेखिएको थियो महाभारत
महाभारतको रचना महषिर् वेदव्यासले गरेका थिए भने यसलाई लेख्ने काम भगवान श्रीगणेशले गरेका थिए । भगवान श्रीगणेशले आफ्नो कलम रोकिन नहुने शर्तमा महाभारत लेखेका थिए ।
त्यतिखेर महषिर् वेदव्यासले पनि आफूले भनेका कुराको अर्थ बुझेर मात्र लेख्नुपर्ने शर्त गणेशजीका अगाडि राखेका थिए । यसैकारण हरेक हजार श्लोकका बीचमा वेदव्यास दोहोरो अर्थ लाग्ने एक कूटश्लोक घुसाइदिन्थे, त्यसको अर्थ बुझ्न गणेश केही बेर रोकिएका बेला व्यासले हजार श्लोक बनाइसक्थे भनिन्छ ।
महाभारत ग्रन्थ पूरा भइसकेपछि त्यसको पहिलो वाचन महषिर् वेदव्यासका शिष्य वैशम्पायनले राजा जनमेजयको सभामा गरेका थिए । राजा जनमेजय अभिमन्युका नाति तथा परीक्षितका पुत्र थिए । जसले आफ्नो पिताको मृत्युको बदला लिने उद्देश्यले सर्पयज्ञको आयोजन गरेका थिए ।
२८औं वेदव्यासले लेखेका थिए महाभारत
महाभारत वेदव्यासले लेखेका थिए भन्नु पनि आधा सत्य हो । वेदव्यास कुनै एकजनाको नाम नभई एक उपाधि थियो जुन उपाधि सम्पूर्ण वेदको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई दिइन्थ्यो । कृष्णद्वैपायन व्याससभन्दा अघि २७ जना वेदव्यास भइसकेका थिए, कृष्णद्वैपायन २८ औं वेदव्यास थिए । केही काला वर्णका तथा टापुमा जन्मिएका हुनाले उनको नाम कृष्णद्वैपायन राखिएको थियो ।
१८ अंकको रहस्य
महाभारतमा १८ अंकको ठूलो महत्व छ । महाभारत पुस्तकमा १८ अध्याय छ । कृष्णले जम्मा १८ दिनसम्म अर्जुनलाई ज्ञान दिएका थिए । कृष्णका कुलको १८ समुदायले मात्र मथुराबाट पलायन गरेका थिए । महाभारतको युद्ध पनि १८ दिनसम्म चलेको थियो ।
महाभारतअन्तर्गत पर्ने गीतामा पनि १८वटै अध्याय छन् । कौरव पक्षका ११ तथा पाण्डव पक्षका सात गरी जम्मा १८ अक्षैहिणी सेनाले महाभारत युद्ध लडेका थिए । यस युद्धका प्रमुख सूत्रधार पनि १८ जना थिए । युद्धपश्चात् जम्मा १८ जना योद्धा जीवित बचेका थिए ।
युद्धका प्रमुख सूत्रधार थिए, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, शकुनि, भीष्म, ऽोण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, कृतवर्मा, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर ।
महाभारत युद्धपश्चात कौरवका तर्फबाट कृपाचार्य, कृतवर्मा र अश्वत्थामा गरी जम्मा तीनजना तथा पाण्डवका पक्षमा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकि, युयुत्सु आदि गरी जम्मा १८ योद्धा जीवित रहेका थिए । महाभारत युद्धमा एक मात्र जीवित धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु थिए जो युद्ध सुरु हुने दिन पाण्डव पक्षमा गएका थिए ।
महाभारतका प्रमुख श्राप
महाभारतमा श्राप तथा वरदान उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ । श्रापको कुरा गर्दा राजा शांतनु पूर्वजन्ममा महाभिष नामका राजा थिए । ब्रहृमाको सेवामा उपस्थित भएका बखत उनी गंगाप्रति मोहित भए ।
अनि ब्रहृमाले रिसाएर उनलाई मनुष्य योनीमा जन्मिएर दुःख झेल्नुपर्ने श्राप दिएका थिए भने गंगालाई पनि पृथ्वीमा गएर जन्म लिनुपर्ने श्राप दिएका थिए । यसैगरी वशिष्ठ ऋषिले आठ वसुलाई मनुष्य योनीमा जन्म लिने श्राप दिएका थिए, जसमध्ये एकलाई लामो समयसम्म पृथ्वीमा बस्नुपर्ने श्राप दिएका थिए र उक्त श्राप पाउने व्यक्ति गंगा पुत्र देवव्रत अर्थात् भीष्म पितामह थिए ।
राजा पाण्डुलाई ऋषि किन्दमले सहवास गरेका खण्डमा मर्ने श्राप दिएका थिए । कर्णलाई गुरु परशुरामले, अर्जुनलाई उर्वशीले, कृष्णलाई गान्धारीले तथा अश्वत्थामालाई कृष्णले श्राप दिएका थिए । यसैगरी महषिर् मैत्रेयले दुर्योधनलाई, द्रौपदीले घटोत्कचलाई, दुर्वासा ऋषिले कृष्णपुत्र साम्बलाई, युधिष्ठिरले समस्त महिला जातिलाई, व्यासले काशी नगरीलाई, माण्डव्य ऋषिले यमराजलाई, द्रौपदीले कुकुरलाई तथा राजा परीक्षितलाई शमीक ऋषिले श्राप दिएका थिए ।
श्रीकृष्णसँग आठ अंकको संयोग अचम्मको छ । भविष्यवाणीअनुसार विष्णुले देवकीको गर्भबाट कृष्णका रुपमा जन्म लिनु थियो । विष्णुले आठौं अवतारका रुपमा आठौं मनु वैवस्वतको मन्वन्तर २८औं द्वापरमा भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन रातको आठौं मुहूर्तमा जन्म लिएका थिए ।
त्यस लग्नमा केवल शुभ ग्रहको दृष्टि थियो । रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथिको संयोगका दिन जयन्ती नामक योग बनेको थियो । उक्त दिन लगभग ३११२ ईसा पूर्व (अर्थात् आजभन्दा ५१२६ वर्ष पहिले) थियो ।
ज्योतिषिहरुका अनुसार रात १२ बजेको उक्त समय शून्य काल थियो । श्रीकृष्णका आठ पटरानी थिए । उनको जीवनमा आठ नगर मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृन्दावन, अवन्तिका, हस्तिनापुर, द्वारका एवं प्रभाष क्षेत्रको विशेष महत्व रह्यो ।
महाभारत युद्ध केवल कृष्णबाट संचालित थियो । महाभारतका प्रत्येक घटनाका सूत्रधार उनी नै देखिन्छन् । दुर्योधनलाई आमाका अगागि नग्नावस्थामा जान रोक्नु, कर्णको कवच कुण्डल इन्ऽद्वारा दान माग्नु, बर्बरीकसँग वरदानका रुपमा उसको टाउको माग्नु, अनेक उपाय लगाएर कौरव पक्षका कर्ण, ऽोण तथा भीष्म, जयद्रथ आदिलाई मराउनु श्रीकृष्णकै नीतिकुशलताको परिणाम थियो । समग्रमा भन्दा श्रीकृष्णकै कारण वा प्रेरणामा महाभारत युद्ध भयो भने उनैले पाण्डव पक्षलाई विजयी बनाए ।
धार्मिक रुपमा प्रसिद्ध मानिने गाईको गहुँत १४८ रोगका लागि समेत…
धार्मिक रुपमा प्रसिद्ध मानिने गाईको गहुँत १४८ रोगका लागि समेत औषधीले भरिपूर्ण, यस्तो छ वैज्ञानिकको अनुसन्धानबाट पुष्टि